Zekaraya 9 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Roman) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Ihe Chineke kpebiri ime mba ndị gbara Juda gburugburu (1-8)
Eze Zayọn na-abịa (9, 10
Eze dị umeala n’obi nọ n’elu jakị (9)
A ga-akpọpụta ndị Jehova a tụrụ mkpọrọ (11-17)
9 Ihe Chineke kpebiri ime: “Jehova ekwuola ihe ọ ga-eme ala Hedrak. Ọ bụ Damaskọs ka ọ ga-eme ya,+N’ihi na anya Jehova na-ahụ ụmụ mmadụ+Nakwa ebo niile e nwere n’Izrel. 2 Ọ ga-emekwa ya Hemat,+ nke ya na ya gbara ókè,Meekwa ya Taya+ na Saịdọn+ n’ihi na ha ma ihe nke ukwuu.+ 3 Taya rụụrụ onwe ya mgbidi siri ike. O kpokọtara ọlaọcha ka ájá,Kpokọtakwa ọlaedo ka apịtị dị n’okporo ámá.+ 4 Lee, Jehova ga-anapụ ya ihe ndị o nwere. Ọ ga-ebibi ndị agha ya n’oké osimiri,+Ọkụ ga-erepịakwa ya.+ 5 Ashkelọn ga-ahụ ya ma tụọ egwu. Ọ ga-ewute Gaza nke ukwuu,Wutekwa Ekrọn maka na e menyela ihe ọ tụkwasịrị obi ihere. Eze Gaza ga-anwụ,E nweghịkwa onye ga-ebi n’Ashkelọn.+ 6 Onye mba ọzọ ga-ebi n’Ashdọd,M ga-ebibikwa ihe onye Filistia ji anya isi.+ 7 M ga-ewepụ ihe ndị dị ya n’ọnụ ọbara tetọrọ,Wepụkwa ihe ndị na-asọ oyi dị ya n’ezé. A ga-ahapụ ya ka ọ fọdụrụ Chineke anyị. Ọ ga-adị ka onyeisi na Juda,+Onye Ekrọn ga-adịkwa ka onye Jebus.+ 8 M ga-eguzoro n’ihu ụlọ m na-eche ya nche,+Ka a ghara inwe onye ga-esi na ya na-apụ apụ ma ọ bụ na-abata abata. E nweghị onyeisi ọrụ* ga-esi na ya gafere ọzọ,+N’ihi na m jirila anya m hụ ya* ugbu a. 9 Zayọn,* ṅụrịa nnukwu ọṅụ. Jeruselem,* tie mkpu mmeri. Lee! Eze gị na-abịakwute gị.+ Ọ bụ onye ezi omume. Ọ na-eweta nzọpụta.* Ọ dị umeala n’obi,+ ọ nọkwa n’elu jakị,N’elu nwa jakị,* nwa nne jakị mụrụ.+ 10 M ga-ewepụ ụgbọ ịnyịnya agha n’Ifrem,Wepụkwa ịnyịnya na Jeruselem. A ga-ewepụ ụta agha. Ọ ga-agwakwa mba dị iche iche na udo ga-adịrị ha.+ Ọchịchị ya ga-amalite n’oké osimiri ruo n’oké osimiri,Malitekwa n’Osimiri Yufretis ruo n’ebe niile ụwa sọtụrụ.+ 11 Ma gị, nwaanyị,* n’ihi ọbara ọgbụgba ndụ mụ na gị,M ga-akpọpụta ndị gị a tụrụ mkpọrọ n’olulu nke mmiri na-adịghị.+ 12 Unu ndị mkpọrọ ndị nwere olileanya, laghachinụ n’ebe a rụsiri ike.+ Taa, ana m asị gị,‘Nwaanyị, m ga-akwụ gị ụgwọ okpukpu abụọ.+ 13 M ga-ekwe Juda* ka ụta m. M ga-eji Ifrem mere akụ́ ụta m. Zayọn, m ga-akpọte ụmụ gị Ka ha megide ụmụ Gris,M ga-emekwa ka ị dị ka mma agha onye agha.’ 14 Jehova ga-eme ka a mara na ya nọnyeere ha,Akụ́ ọ ga-agba ga-apụ ngwa ngwa ka àmụ̀mà. Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova ga-afụ opi,+Ọ ga-esorokwa ifufe nke si n’ebe ndịda gawa. 15 Jehova nke ụsụụ ndị agha ga-echebe ha. Ha ga-emeri ndị iro ha ndị ji èbè* na-agba ha nkume.+ Ha ga-aṅụrị ọṅụ ma na-eti mkpu ka à ga-asị na ha ṅụrụ mmanya. Ha ga-adị ka efere mmanya juru,Dịkwa ka akụkụ ebe ịchụàjà nke ọbara juru na ya.+ 16 Jehova bụ́ Chineke ha ga-azọpụta ha n’ụbọchị ahụOtú onye ọzụzụ atụrụ si azọpụta atụrụ ya;+N’ihi na ha ga na-egbuke egbuke n’ala ya ka ọmarịcha nkume ndị na-adị n’okpueze.+ 17 N’ihi na otú o si dị mma enweghị atụ,+Ọ makwara ezigbo mma. Nri ga-eme ka ụmụ okorobịa na-eme nke ọma,Mmanya ọhụrụ ga-emekwa ka ụmụ agbọghọ* na-eme nke ọma.”+
^ Ma ọ bụ “onye mmegide.”
^ O nwere ike ịbụ ahụhụ ndị ya na-ata.
^ Na Hibru, “Ada bụ́ Zayọn.”
^ Ma ọ bụ “Ọ na-emeri emeri.”
^ Ma ọ bụ “oké jakị.”
^ Ya bụ, Zayọn, ma ọ bụ Jeruselem.
^ Na Hibru, “ga-azọ Juda ụkwụ.”
^ Na Hibru, “ụmụ agbọghọ na-amaghị nwoke.”